सडक किनारका रुखको संरक्षणको जिम्मा महानगरको कि सरकारको ? « Media Club Nepal
१७ असार २०७६, मंगलवार ०५:४०
सडक किनारका रुखको संरक्षणको जिम्मा महानगरको कि सरकारको ?
प्रकाशित मिति : १७ असार २०७६, मंगलवार ०५:४०
काठमाडौं । राजधानीमा रोपिएको रुखको कसले संरक्षण गर्ने ? महानगरपालिकाले कि सरकारले ? देशको राजधानी काठमाडौंकोको सडक किनारामा रोपिएका विरुवाको संरक्षण गर्ने जिम्मा सरकारको हो ।
तर राजधानीलाई हरियाली बनाउने जिम्मा लिएको महानगरपालिकाले सबै विरुवा संरक्षण गर्ने जनाएको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको वन कार्यालयले राजधानीको विभिन्न सडक छेउमा वृक्षरोपण गरेको थियो । चक्रपथमा रोपिएका विरुवाको संरक्षण वन विभागले गर्ने भएता पनि त्यसको रेखदेखको जिम्मा स्थानीय निकायको हुने प्रावधान छ ।
मेयर शाक्यले कामपा र अन्य सरोकारवाला निकायको सहयोगमा विरुवा संरक्षण गर्ने योजना रहेको बताए । भने, ‘सरकारले राजधानीमा रोपेको बिरुवा मर्न दिदैनौं, यसलाई जसरी भए पनि संरक्षण गरी देशको संघीय राजधानीलाई हरित राजधानीको रुपमा बिकास गर्नेछौ ।’ नेपाल समाचारपत्र दैनिक